TOP 3 – Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
TOP 3 | Qalbiga furan ayuu ka yimaadaa Wajiga furan
NIMCAAN HILLAAC, Jawaabo Saliim ah oo ku raali gelinaya LIVE With Cabdimaalik muuse coldoon
SHEEKADII QALBIGII FACEBOOK.COM QAYBTEEDII ( 2AAD ) Akhristayaal Qaybti kowad ee sheekadeena waxay inoo joogtay in Ramlo ay wacday lamaanaheeda Salmaan ayna usheegtay…… Hadaba Ramlo Markii ay wacday lamaanaheeda salmaan waxay u sheegtay inaysan wada kulmi doonin arimo dhanka Qoyskaa oo soo wajahay awgeed. Salmaan waa uu ka aqblay balse waxa uu usheegay in asbuuca dambe uu imaanayo Gobolka ay ku nooshahay Ramolo ee Gobolka Sool. Ramlo waxay salmaan u ...
Waan hubaa Hadaad Daawato In aad qireyso Awooda Jaceylku leeyahay Waan hubaa mid walba oo inaga mid ah inuu soo maray Jacayl, Hadda Hayyo , ama Ku dhici doono! Waa sababta uu weli u noolyahay Magaca Jcaylku ! Mid gaaban, mid dheer, mid madow mid cad, mid foolxun iyo mid qurux badanba Dareenkani (Jacayl) mar uun buu asiibaa, Waa sababta uu weli u noolyahay Magaca Jcaylku !